DOWNLOAD တွမ်အဲယားဘတ်စ် A330-200MRTT FSX - Rikoooo
အရွယ် 45.0 ကို MB
downloads ရယူရန္ 29 572
Author: ခရစ်အီဗန် & လူးဝစ် Quintero & Rikoooo အားဖြင့်သောမတ်စ်ရုသက, ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများကမော်ဒယ်
03 / 06 / 2018 အပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: အတူ Now ကိုသဟဇာတ Prepar3D v4 + နှစ်ခု liveries: ဂျာမန်ရေနံတင်သင်္ဘောများနှင့် RAAF အသစ် gauge, က virtual cockpit အသစ် HD ကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသစ်အသံသစ် 2d panel က, FMC ကဆက်ပြောသည်, Autoland CAT II နှင့် III ကိုကဆက်ပြောသည်, အဲယားဘတ်စ် GPWS ကဆက်ပြောသည်။
မဆိုဗားရှင်းထိပ်တန်းအရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ရေနံတင်သင်္ဘော FSX နှင့် Prepar3D။ တစ်ဦးကို virtual cockpit နဲ့ထုံးစံအသံနှင့်တကွကြွလာ။ ကာတွန်းနှင့်အလုပ်လုပ်ဆီဖြည့ရိုးနှင့်အတူပါဝင်စေပါကသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူဖို့ကို manual ကိုဖတ်ပါ။
သာက virtual cockpit overhead ကနေရရှိနိုင်တဲ့ဆီဖြည့ရိုး panel က (အနီရောင်စက်ဝိုင်း) ၏မျက်နှာပြင်ပုံအောက်တွင်။
အမျိုးမျိုးသော screenshots များ
အဆိုပါ A330 ဘက်စုံအခန်းက္ပရေနံတင်သင်္ဘောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (MRTT) ကိုအဲယားဘတ်စ် A330-200 လေယာဉ်များ၏စစ်ရေးဆင်းသက်လာသည်။ ဒါဟာ Dual-အခန်းကဏ္ဍဝေဟင်မှဝေဟင်ဆီဖြည့နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်အဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည်။ ဝေဟင်မှဝေဟင်ဆီဖြည့မစ်ရှင်များအတွက် A330 MRTT အောက်ပါစနစ်များကိုမဆိုပေါင်းစပ်တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်:
receptacle-တပ်ဆင်ထားလက်ခံလေယာဉ်ပျံများအတွက် * အဲယားဘတ်စ်စစ်ရေးဝေဟင်ဆီဖြည့ Boom စနစ် (ARBS) ။
စုံစမ်းစစ်ဆေး-တပ်ဆင်ထားလက်ခံလေယာဉ်ပျံများအတွက် * Cobham 905E အောက်မှာ-တောင်ပံဆီဖြည့တောငျ့။
* Cobham 805E ယာဉ်ကိုယ်ထည်ဆီဖြည့ယူနစ် (FRU) အာကာသယာဉ်တပ်ဆင်လက်ခံလေယာဉ်ပျံများအတွက်
Self-ဆီဖြည့များအတွက် * Universal ဝေဟင်ဆီဖြည့ Receptacle စနစ်တပ်ဆင်ခြင်း (UARRSI) ။
အဆိုပါ A330 MRTT 111,000 ကီလိုဂရမ် (245,000 ပေါင်) ၏အမြင့်ဆုံးလောင်စာစွမ်းရည်ရှိပါတယ်။ စံလောင်စာစွမ်းရည်ကုန်တင်တစ်ဦးအပိုဆောင်း 45,000 ကီလိုဂရမ်၏ရထားခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါ A330 MRTT ရဲ့တောင်ပံလေးခုအင်ဂျင် A340-200 / -300 အ A340 ရဲ့ပဲ့ချိတ်အင်ဂျင်များအတွက်အားဖြည် mounting တည်နေရာနဲ့ဘုံဖွဲ့စည်းပုံမှာရှိပါတယ်။ အဆိုပါ A330 MRTT ရဲ့တောင်ပံထို့ကြောင့်တောင်ပံဆီဖြည့တောငျ့ဤ hardpoints ၏အသုံးပြုမှုအတွက်နည်းနည်းပြုပြင်မွမ်းမံရန်လိုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါ A330 MRTT အခန်းစွမ်းရည်မြှင့်ခြင်းနှင့်နှစ်သိမ့်နှစ်ဦးစလုံးတိုးမြှင့်သောအတန်းထဲတွင်အကောင်းဆုံးထိုင်ခုံ configurations, သေချာစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါလေယာဉ်တစ်ခုတည်းအတန်းအစား configuration ကိုအတွက်ခရီးသည် 253 ရန်, နှစ်ဦး-class ကို configuration ကိုအတွက် 298 ခရီးသည်ကတဆင့်, သုံးအတန်းအစား configuration ကိုအတွက် 380 ထိုင်ခုံကနေအပြင်အဆင်၏ကြီးမားသောအမျိုးမျိုးအတွက် configured နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါလေယာဉ်တစ်ဆွဲဆောင်မှုခေတ်သစ်ဒီဇိုင်းခင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤအင်္ဂါရပ်များသည် A မြင့်ဆုံးအမှီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှ VIP နှင့်ဧည့်သည်မစ်ရှင်များအတွက်သင့်လျော်သောရှုပ်ထွေးသောစိတ်ကြိုက်ဖို့ configurations ၏ပြီးပြည့်စုံအကွာအဝေးကို enable ။ အရှေ့သို့ cabin ထဲမှာတည်ရှိပါတယ်တစ်ဦးရွေးချယ်နိုင်လေယာဉ်အမှုထမ်းငြိမ်ဝပ်စွာ နေ. compartment (စီအာစီ), တစ်မစ်ရှင်များအတွက်ရရှိနိုင်အချိန်တိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးအားလပ်ချိန်မှာအမှုထမ်းများအတွက် install လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အ A330 MRTT ၏ခရီးသည်လေယာဉ် airbridges သို့မဟုတ်မြေပြင်အထောက်အပံ့ပစ္စည်းကိရိယာများမရရှိနိုင်သည့်အခါလေယာဉ်ပျံရိုက်ထည့်ပါနဲ့ထားခဲ့ဖို့သင်္ဘောသားများနှင့်ခရီးသည်ကို enable ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ airstairs အစုတခုနှင့်အတူပေးထားနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ A330 MRTT လည်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေး (Medevac) မစ်ရှင်ဖျော်ဖြေဖို့ configured နိုင်ပါသည်။ ထိုလေယာဉ်ကိုယ်ထည်၏ကြီးမားသောအရွယ်အစားအများဆုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခွင့်နှင့်စံထမ်းစင် 130 မှဥပမာအားလုံးလူနာနှစျသိမျ့ထသေချာယူသွားနိုင်ပါသည်။
အ A330-200 ကဲ့သို့ပင် A330 MRTT နှစ်ခုအနိမ့်ကုန်းပတ်ကုန်တင်အခန်း (ရှေ့သို့နှင့် AFT) နှင့်နောက်ထပ်လေယာဉ်တင်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်များလည်းပြသသောအမြောက်အများဧရိယာစွမ်းရည်ပါဝင်သည်။ အဆိုပါကုန်တင်ကိုင်အရပ်သား ULD အပြင်စစ်ရေး pallets 8 အထိသယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်မှပြုပြင်လိုက်ပါ။
အ A330 MRTT များ၏စွမ်းဆောင်ရည်များလည်းကုန်တင်ရွေးချယ်စရာ၏ကြီးမားသောအရေအတွက် optional ကိုအဓိကကုန်းပတ်ကုန်တင်အခန်းအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ခံရဖို့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ စံစီးပွားဖြစ်ကွန်တိန်နာများနှင့် pallets မှစ. စစ်တပ်, ISO နှငျ့နေတိုး (ထိုင်ခုံအပါအဝင်) pallets နှင့်ကွန်တိန်နာများကတဆင့်, စစ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်တစ်ဦးကုန်တင်တံခါးကိုတဆင့်တင်ဆောင်ထားတဲ့အခြားကြီးမားသောပစ္စည်းများမှ။
စံစီးပွားဖြစ် A330-200s ဆီဖြည့စနစ်များနှင့်စစ်ရေးကိရိယာများအား၏လျောက်ပတ်သည်အ Getafe အတွက်အဲယားဘတ်စ်စစ်ရေးကူးပြောင်းခြင်းစင်တာ (စပိန်) မှ Toulouse အတွက်အဲယားဘတ်စ်နောက်ဆုံးညီလာခံ LINE (ပြင်သစ်) မှကယ်နှုတ်တော်မူ၏ကြသည်။ ဒီဒုံးပျံပစ်လွှတ်ဖောက်သည်မှပထမဦးဆုံးပေးပို့, သြစတြေးလျလယ်ပိုင်း 2010 ဘို့စီစဉ်ထားသည်။ Qantas တို့တပ်မတော်အ RAAF ဘို့ EADS ၏ကိုယ်စားအပေါ်ဘရစ္စဘိန်းလေဆိပ်အဆောက်အအုံမှာကျန်ရှိသောလေး A330-200s converting ဖြစ်ပါတယ်။